» टेलिकमको ओरालो यात्राः व्यापार र नाफा दुबैमा भारी गिरावट
टेलिकमको ओरालो यात्राः व्यापार र नाफा दुबैमा भारी गिरावट
२०७७ माघ ३०, शुक्रबार ०९:४४
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ओरालो यात्रा उत्कर्षमा पुगेको छ । टेलिकमले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्त अवधीको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा ३३.४० प्रतिशतले घटेको छ । गत आवको पहिलो छ महिनामा ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको कम्पनी यसपाली ३ अर्ब २८ करोडमा खुम्चिएको छ ।
टेलिकमको इन्टरनेट, मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवाको आम्दानी अघिल्लो पुसमा १८ अर्ब ३ करोड गरेको थियोतर यसपाली १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमै खुम्चिएको छ । अर्थात कम्पनीको मुल आम्दानीको श्रोत नै १.७४ प्रतिशतले घटेको छ।
बैंक ब्याज र अन्य आम्दानी पनि २६.६५ प्रतिशतले घटेर २ अर्ब ८५ करोडमा सिमित भएको छ । जुन गत आवको यहि अवधीमा ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । कम्पनीको कुल आम्दानी २० अर्ब ५७ करोड मात्रै छ जबकी गत आवको सोही अवधीमा त्यस्तो आम्दानी २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थियो ।
१५ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा कर्मचारीसहित सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ८.४७ प्रतिशत छ । बाँकी सेयर सरकारी स्वामित्वमा छ । ८० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा छ भने पुँजी कोषको आकार ९५ अर्ब ५२ करोड रुपेयाँ छ। टेलिकमले हालसम्म कति लाभांश दिने भन्ने टुंगो लगाईसकेको छैन् ।
कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हिस्सा बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले कम्पनीको बार्षिकोत्सव समारोहमा सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सा बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।टेलिकममा पुँजी लगानीसहितको विदेशी साँझेदार भन्दा व्यवस्थापन करारमा साँझेदारी खोज्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले बताएका छन् ।
मध्यमस्तरको विकासशिल देश बन्दै नेपाल, अन्तराष्ट्रिय अनुदान घट्ने, निर्यातको सहुलियत हट्ने
उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप, तर खुकुलियो (के गर्न पाइने ? के नपाइने ?)
संस्थागत अभिकर्तालाई लाइसेन्स दिने निर्णयबाट पछि हट्दैनौंः बीमा समिति
नेप्से ऐतिहासिक बिन्दुमा, हालसम्मकै उच्च कारोबार (यी ३८ कम्पनीका लगानीकर्ता मालामाल)
सामाजिक सुरक्षा कोषः किन फस्यो विरोधको भूमरीमा ? अब के गर्ने ?
‘मैले मात्र होइन, संसारका कुनै विद्वानले सेयर बजार कति बढ्छ र कति घट्छ भन्न सक्दैन’ (भिडियो अन्तर्वार्ता)
एयरपोर्टमा भारतीय सेना राख्ने भन्ने कहिँ छैैनः प्राधिकरण
माधव नेपाल निवासमा देउवा र प्रचण्ड, के के भयो कुरा ?
उपत्यकामा बैंकका सबै शाखा खुल्ने, सबै खाले बैंकिङ कारोबार सुचारु
चिनियाँ ढुकुटीमा जम्मा भयो १७५३ मेट्रिक टन सुन
ट्यांकर चालकले रोके पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी, यस्तो छ कारण
अचाक्ली महंगो भयो घ्यू र खानेतेल, कति बढ्यो मूल्य ?
एक खर्ब नाघ्यो निर्यात, के के गयो विदेश ?
जर्मनीले चार अर्ब ८० करोड अनुदान दिने, कहाँ हुन्छ खर्च ?